Olga Steshkina ၏ဘလော့ဂ် Olga Steshkina ၏ဘလော့ဂ်
Olga Steshkina ၏ဘလော့ဂ်
Зачем нужен ганаш? Зачем нужен ганаш? 2021-10-23 19:00:04	အစာ Olga Sologub Зачем стабилизировать ганаш? Если дать расслоившемуся ганашу стабилизироваться, то у него будет не гладкая текстура, а зернистая за счет недостаточной дисперсии жира (частицы жира слишком… ဖတ်
Быстрый ответ: Нужно ли сливать жидкость при засолке красной рыбы? Быстрый ответ: Нужно ли сливать жидкость при засолке красной рыбы? 2021-10-23 19:00:04	အစာ Olga Sologub Нужно ли сливать жидкость при засолке рыбы? Что важно запомнить: при посоле рыбы периодически выделяется сок (это смесь соли и жидкости, выходящей из рыбы), а… ဖတ်
Лучший ответ: Сколько нужно градусов чтобы пожарить яичницу? Лучший ответ: Сколько нужно градусов чтобы пожарить яичницу? 2021-10-23 19:00:04	အစာ Olga Sologub Как долго надо жарить яичницу? В нагретую сковороду вылить яйца (держать тарелку близко к поверхности сковородки). Жарить яйца 1 минуту на сильном огне. Затем огонь… ဖတ်
Нужно ли добавлять яйца в хлеб? Нужно ли добавлять яйца в хлеб? 2021-10-23 19:00:04	အစာ Olga Sologub Для чего нужны яйца в дрожжевом тесте? Яйца добавляют чтобы обогатить тесто белками и витаминами, выпечка получается вкуснее и полезнее. Чтобы пирожки и булочки не… ဖတ်
Вопрос: Когда нужно печь Пасхи 2021? Вопрос: Когда нужно печь Пасхи 2021? 2021-10-23 19:00:04	အစာ Olga Sologub Когда надо печь пасху? Согласно традициям, паски принято выпекать в среду, Чистый четверг и субботу. Если куличи, выпеченные в среду, к празднику успеют потерять свежесть… ဖတ်
Зачем тесту подходить два раза? Зачем тесту подходить два раза? 2021-10-23 19:00:04	အစာ Olga Sologub Сколько раз можно Обминать дрожжевое тесто? В процессе брожения дрожжевого теста его обязательно обминают хотя бы один раз. Обминка теста преследует несколько целей. Во-первых, удаляются… ဖတ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ချစ်သောအချက်အပြုတ်ကျွမ်းကျင်သူများ။ နံရိုးများကိုစနစ်တကျကင်။ ကင်။ မီးဖို၌ဖုတ်သည်ကိုသင်နှစ်သက်ပါသလား။ ငါ့မှာတစ်ယောက်ပဲရှိတယ် ... ဖတ်
teriyaki marinade တွင်ဝက်သားနံရိုးများကိုကင်။ ချက်ပုံအဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်နည်း 2017-11-13 12:07:25 ချက်ပြုတ်နည်းများ
မီးဖို၌ puff pastry ပေါ်တွင် omelet နံနက်စာအတွက်မီးဖို၌ puff pastry ပေါ်တွင်မူရင်း omelette ကိုချက်ပြုတ်ပုံအဆင့်ဆင့် 2017-09-28 11:53:16 ချက်ပြုတ်နည်းများ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအစားအစာများ။ ငါ့ကိုပြောပါ၊ ချက်ရန်လွယ်ကူသောအစားအစာများကိုသင်နှစ်သက်ပါသလား။ ငါ့သားလမ်းလျှောက်လာတယ်၊ ချက်ပြုတ်ရတာအမြန်ကြိုက်တယ်၊ ဖတ်
လိမ္မော်သီးနှင့်သံပေါင်ကြက်သားပေါင် ကြက်ပေါင်များကိုလိမ္မော်သီးနှင့်သံပုရာဖြင့်မီးဖို၌ချက်ပုံအဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်ပုံအဆင့်ဆင့် 2017-09-15 12:08:35 ချက်ပြုတ်နည်းများ
မင်္ဂလာပါ၊ အရသာရှိသောဟင်းလျာများကိုနှစ်သက်သူများ။ ငှက်သည်သစ်သီးများနှင့်ဘယ်ရီသီးများဖြင့်ကောင်းစွာသွားကြောင်းသင်ငြင်းလိမ့်မည်မထင်ပေ။ ဥပမာ၊ ပွဲလမ်းသဘင်ပွဲတစ်ခု၏အမှတ်တံဆိပ်ပန်းကန် ... ဖတ်
ratatouille ကိုမှန်ကန်စွာချက်ပြုတ်နည်း ratatouille ကိုမှန်ကန်စွာချက်ပြုတ်နည်း-ပါးစပ်မှရေဓာတ်ပါသောဓာတ်ပုံများနှင့်အတူဂန္ထဝင်အဆင့်ဆင့်စာရွက် 2017-09-11 11:57:48 ချက်ပြုတ်နည်းများ
မင်္ဂလာပါချစ်သောစားဖိုမှူးများခင်ဗျာ။ မကြာသေးမီကငါ Ratatouille ကာတွန်းကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ သင်လက်မလျှော့လျှင်သင်လိုချင်သည့်အရာသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟူသောပုံပြင်ကောင်းလေးဖြစ်သည်။ အိပ်မက်တစ်ခုမက်ပါစေ ... ဖတ်
ဒိန်ခဲနှင့်အတူအာလူး casserole ဒိန်ခဲနှင့်အရသာရှိသောအာလူးစွပ်ပြုတ်ကိုချက်ပြုတ်ပုံအဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်ပုံအဆင့်ဆင့် 2017-09-04 12:01:10 ချက်ပြုတ်နည်းများ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ချစ်သောအချက်အပြုတ်ကျွမ်းကျင်သူများ။ ငါ့သူငယ်ချင်းတော်တော်များများက casserole ကို curd pie နဲ့တွဲစားတာငါသတိထားမိတယ်။ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ casseroles များသည်ဝိညာဉ်ထဲသို့နစ်မြုပ်သွားသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖတ်
Diet Minus 60 - တစ်ပတ်အတွက်မီနူး
ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမယ့်နည်းလမ်းကအစာငတ်မခံပါနဲ့။ အစားအသောက်အနုတ် ၆၀ ...
Ducan ၏အစားအစာ - တိုက်ခိုက်မှုအဆင့်
နာမည်ကြီး Ducan Attack Diet - ခွင့်ပြုထုတ်ကုန်များနှင့် ...
Dukan အစားအစာ - အဆင့်များနှင့်မီနူးများ
Вопрос: Когда нужно печь Пасхи 2021? Вопрос: Когда нужно печь Пасхи 2021? 2021-10-23 19:00:04 အစာ Olga Sologub Когда надо печь пасху? Согласно традициям, паски принято выпекать в среду, Чистый четверг и субботу. Если куличи, выпеченные в среду, к празднику успеют потерять свежесть… ဖတ်
Ваш вопрос: Как хранить бальзамический соус? Ваш вопрос: Как хранить бальзамический соус? 2021-10-23 19:00:04 အစာ Olga Sologub Как хранить бальзамический крем? Хранить при температуре от -5’С до +30’С и относительной влажности 75%. После вскрытия бутылку хранить в холодильнике. Как хранить бальзамический уксус… ဖတ်
Зачем нужен ганаш? Зачем нужен ганаш? 2021-10-23 19:00:04 အစာ Olga Sologub Зачем стабилизировать ганаш? Если дать расслоившемуся ганашу стабилизироваться, то у него будет не гладкая текстура, а зернистая за счет недостаточной дисперсии жира (частицы жира слишком… ဖတ်
Лучший ответ: Сколько нужно градусов чтобы пожарить яичницу? Лучший ответ: Сколько нужно градусов чтобы пожарить яичницу? 2021-10-23 19:00:04 အစာ Olga Sologub Как долго надо жарить яичницу? В нагретую сковороду вылить яйца (держать тарелку близко к поверхности сковородки). Жарить яйца 1 минуту на сильном огне. Затем огонь… ဖတ်
Зачем тесту подходить два раза? Зачем тесту подходить два раза? 2021-10-23 19:00:04 အစာ Olga Sologub Сколько раз можно Обминать дрожжевое тесто? В процессе брожения дрожжевого теста его обязательно обминают хотя бы один раз. Обминка теста преследует несколько целей. Во-первых, удаляются… ဖတ်
Быстрый ответ: Нужно ли сливать жидкость при засолке красной рыбы? Быстрый ответ: Нужно ли сливать жидкость при засолке красной рыбы? 2021-10-23 19:00:04 အစာ Olga Sologub Нужно ли сливать жидкость при засолке рыбы? Что важно запомнить: при посоле рыбы периодически выделяется сок (это смесь соли и жидкости, выходящей из рыбы), а… ဖတ်
Maggi အစားအသောက်အကြောင်းသင်မေးချင်ခဲ့သမျှ Maggi ဓာတ်စာအကြောင်းသင်မေးချင်သမျှ - အမေးအများဆုံးမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများ 2018-10-23 14:30:07 အစားအစာ Olga Sologub Maggi Diet ၏ကွဲပြားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးအများဆုံးမေးခွန်းများစုစည်းမှု။ ကိုယ်အလေးချိန်ရပ်တန့်သွားလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ၊ အစိုးရကိုချိုးဖောက်လျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်အပိုင်းအရွယ်အစား၊ ဝမ်းချုပ်လျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ခွင့်ပြုထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သစ်သီးများ၊ ဥများကိုမည်သို့အစားထိုးနိုင်သနည်း၊ အဘယ်ငါးကိုစားရန်နှင့်အရက်နှင့်စပျစ်ရည်ကိုခွင့်ပြုသည်။ ဖတ်
အဘယ်အရာကိုအစားအစာအရှုံးအလေးချိန်ကိုအထောက်အကူပြု မည်သည့်အစားအစာများကဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုမြန်ဆန်စေကာအဆီလောင်ကျွမ်းစေပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သနည်း။ 2017-12-17 21:18:32 အစားအစာ Olga Sologub ပိုလျှံသောကိုယ်အလေးချိန်ကိုမြန်မြန်ကျစေရန်အတွက်လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဇီဝြဖစ်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးသောအစားအစာများကိုစားရန်လိုသည်။ ဒါကိုဘယ်သူတွေကကူညီမလဲ။ ဒီဆောင်းပါးမှာအကောင်းဆုံးစာရင်းကိုသင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီနည်းသောဟင်းချိုများ၊ စီရီရယ်များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်ကိုယ်အလေးချိန်အမြန်ကျရန်ကောင်းမွန်သည်။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်အစားအစာများကိုမျိုးစုံကွဲပြားစေသည် - သူတို့သည်အဆီလောင်ကျွမ်းစေပြီးအထူးသဖြင့်အစာအိမ်နှင့်ဘေးနှစ်ဖက်တွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည်။ ဖတ်
ဂျင်းချဉ်နှင့်ဝိတ်ချပါ ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဂျင်းချဉ်ကကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ကောင်းလား။ 2017-11-01 11:59:14 အစားအစာ Olga Sologub အဝလွန်တာကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ပင်ပန်းနေပြီလား။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းဖို့အတွက်ဂျင်းချဉ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျင်းကိုမည်သို့ယူရမည်၊ အသုံးဝင်သောအချက်များကိုမှန်ကန်စွာသုံးပါက၊ မည်မျှစွန့်ပစ်သည်ကိုကောက်ယူသည်။ အိမ်တွင်ဂျင်းချဉ်အတွက်အသုံးဝင်သောစာရွက်၊ ထုတ်ကုန်၏ကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများ ဖတ်
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ဘာတွေစားဖို့လိုလဲ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအာဟာရနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ခြင်းသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ဘာတွေစားဖို့လိုလဲ။ 2017-10-27 11:44:46 အစားအစာ Olga Sologub ကိုယ်အလေးချိန်လွန်ကဲခြင်းသည်ယနေ့ခေတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကာလရှည်ကြာကြုံတွေ့နေရသောပြသနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ကယ်လိုရီရေတွက်ခြင်းတို့သည်သက်သာလာသည်။ ဤဆောင်းပါးမှသင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်သင်ဘာစားရမည်၊ မည်သည့်အစားအစာများကိုရွေးချယ်သည်၊ ပိုကောင်းသောရလဒ်များအတွက်သင်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်၊ လမ်းလျှောက်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်သည်။ ဖတ်
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်ဒုတိယမြောက်နံနက်စာ "ဒုတိယနံနက်စာ" သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်လျှို့ဝှက်လက်နက်ဖြစ်ပါသလား။ 2017-10-14 11:57:27 အစားအစာ Olga Sologub လူများစွာသည်နံနက်စာစားခြင်းသည်အောင်မြင်သောနေ့တစ်နေ့အတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏နံနက်စာကိုတစ်ဝက် ခွဲ၍ စားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်ပိုမိုတန်ဖိုးထားသည်။ ဖတ်
အလေးချိန်ကိုမကြာခဏခြိမ်းခြောက်နေသောအရာများ မကြာခဏကိုယ်အလေးချိန်မကြာခဏကျခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံမှုပုံမှန်ကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း 2017-10-12 11:58:59 အစားအစာ Olga Sologub လူများစွာသည်သူတို့၏ကိုယ်အလေးချိန်ကိုကြည့်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချို့လူတွေကဒါကိုအရမ်းစွဲလမ်းကြတယ်။ ရွှေအညွှန်းကိုဘယ်လိုရှာမလဲ။ စကေးကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ကြည့်ဖို့အရမ်းလွယ်ပါတယ် ဖတ်
အမျိုးသမီးများအတွက် Kegel လေ့ကျင့်ခန်း အိမ်မှာအမျိုးသမီးများအတွက် Kegel လေ့ကျင့်ခန်းကိုဘယ်လိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်မလဲ။ 2018-04-02 11:56:23 သေးသွယ်မှု Olga Sologub Wumbling သို့မဟုတ် vaginal Kegel လေ့ကျင့်ခန်းများသည်အလွန်အကျိုးရှိသောလေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးမှသင်အိမ်တွင်အမျိုးသမီးများအတွက်မှန်ကန်သောကျွမ်းဘားကစားနည်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း၊ ရာသီလာစဉ်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ အစပြုသူနှင့်ဘောလုံးလေ့ကျင့်သူများအတွက်သင်ခန်းစာများအဆင့်ဆင့်အစုံ။ ဖတ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် Kegel လေ့ကျင့်ခန်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် Kegel လေ့ကျင့်ခန်းများကိုမည်သို့စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း၊ ၎င်းတို့တွင်မည်သည့်ဆန့်ကျင်မှုများရှိသနည်း။ 2018-03-30 11:56:22 သေးသွယ်မှု Olga Sologub Kegel လေ့ကျင့်ခန်းများပါ ၀ င်သောလေ့ကျင့်ခန်းသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရက်သတ္တပတ် ၄၀ အထိအကျိုးရှိသည်။ ပထမသုံးလပတ်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းဒုတိယနှင့် ၃ တွင်အကျိုးကျေးဇူးများသိသာထင်ရှားလိမ့်မည်။ ဆောင်းပါး၌အိမ်၌ကျွမ်းဘားကစားနည်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည့်အချက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဖတ်
Kegel Ball ကျွမ်းဘား Kegel ဘောလုံးများနှင့်ရင်းနှီးသောကျွမ်းဘားကစားနည်း 2018-03-28 12:14:18 သေးသွယ်မှု Olga Sologub အမျိုးသမီးများအတွက်အမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်ကြွက်သားများအားကောင်းရန်လည်းအိမ်တွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအတွက်သင်ကြက်ဥ (သို့) Kegel ဘောလုံးများလိုအပ်သည်။ ဒီလို Simulator ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။ သူတို့ဘာအတွက်၊ သူတို့ဘာအတွက်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်သလဲဆိုတာတွက်ကြည့်ရအောင်။ ဒီဆောင်းပါးမှာဘောလုံးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်၊ စတင်အသုံးပြုသူများအတွက်အရွယ်အစားဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေ၊ ဘယ်လိုထည့်သွင်းပုံနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ဖတ်
အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း ပါးလွှာသောခန္ဓာကိုယ်အတွက်တစ်နေ့လျှင် ၁၅ မိနစ်၊ ဝမ်းဗိုက်ကိုပိန်စေသောအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း 2018-03-09 11:58:03 သေးသွယ်မှု Olga Sologub တစ်နေ့လျှင် ၁၅ မိနစ်ခန့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်ရလဒ်ကောင်းများကိုရရှိစေနိုင်သည်။ ဝမ်းဗိုက်တွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေရန်အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းများကိုကျွမ်းကျင်ရန်လုံလောက်သည်။ အဲဒါဘာလဲ? ဆောင်းပါး၌ Marina Korpan ၏ကိုယ်ခန္ဓာအကြောပြင်ခြင်း၊ Strelnikova ၏ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း၊ ဂျပန်နည်းစနစ်အတိုင်းစတင်သူများနှင့်အတန်းများအတွက် jianfei ၏ဖော်ပြချက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်။ ၈ မိနစ်အတွင်းလေ့ကျင့်ခန်း၏အခြေခံကိုပြသောဗီဒီယိုကိုကြည့်နိုင်သည်။ ဖတ်
ဗိုက်ပိန်စေသောလေ့ကျင့်ခန်းများ ဝမ်းဗိုက်၊ တင်ပါးနှင့်တင်ပါးတို့တွင်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သောကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းများကိုသိလိုပါသလား။ 2018-03-07 11:58:05 သေးသွယ်မှု Olga Sologub လေ့ကျင့်ခန်းကိုအားကစားရုံမှာတင်မကဘဲအိမ်မှာထိုင်ပြီးကုလားထိုင်ပေါ်မှာပါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်းများကို fitball၊ bodyflex အသက်ရှူရှုပ်ထွေးမှု၊ ငြိမ်ဘားနှင့်အခြားအရာများပေါ်တွင်ရွေးချယ်ထားသည်။ Dumbbell လေ့ကျင့်ခန်းသည်ဝမ်းဗိုက်နှင့်ဘေးနှစ်ဖက်၊ တင်ပါး၊ တင်ပါးနှင့်လက်မောင်းများကိုပိန်စေသည်။ ဖတ်
Kegel စက်တွေကဘာအတွက်လဲ။ အင်္ဂါဇာတ် Kegel သင်တန်းဆရာကဘာအတွက်လဲ။ အသုံးပြုမှုအတွက်လမ်းညွှန်ချက်၊ လမ်းညွှန်ချက် 2018-03-06 11:56:56 သေးသွယ်မှု Olga Sologub အမျိုးသမီးများအတွက် Kegel simulators များ၏အကူအညီဖြင့်တင်ပါးဆုံကြွက်သားများအားကောင်းလာနိုင်သည်။ ဒါကဘာလဲ၊ ဘောလုံးဘယ်လိုသုံးမလဲ၊ ဘယ်လိုဆန့်ကျင်ဖက်တွေရှိလဲ - ဒီဆောင်းပါးမှာဖတ်ပါ။ Magic Kegel Master and kGoal ၏နာမည်ကျော်မော်ဒယ်များ၏ဖော်ပြချက်၊ အိမ်တွင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဖတ်
Face primer ဆိုတာဘာလဲ Face primer: အဲဒါဘာလဲ၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ + အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တွေရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 2019-01-24 15:59:02 Красота Olga Sologub မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းပါချစ်သောဘလော့ဂ်စာဖတ်သူများ။ Face primer ဆိုတာဘာလဲသိလား။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေရဲ့အကြံဥာဏ်ကိုလိုက်နာတဲ့သူတွေကဒီထုတ်ကုန်ကိုသူတို့ရဲ့အလှကုန်အိတ်ထဲမှာအကြာကြီးထည့်ထားကြတယ်။ ပြီးတော့မဟုတ်ဘူး ... ဖတ်
မျက်နှာအတွက် hyaluronic acid ၏အကျိုးကျေးဇူးများ မျက်နှာအတွက် hyaluronic acid ၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအလှကုန်နှင့်အိမ်တွင်သုံးသည် 2018-08-29 09:21:57 Красота Olga Sologub မျက်နှာအတွက် hyaluronic acid ဆိုတာဘာလဲ။ အဘယ်ကြောင့် hyaluronic-based fillers များလိုအပ်ပုံ၊ အိမ်တွင် cream နှင့် serum ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ၊ ထိုးဆေးများအသုံးပြုခြင်း၊ mesotherapy နှင့် biorevitalization တို့အတွက်၊ နှုတ်ခမ်းနှင့်အလှအပအတွက် nasolabial folds များအတွက်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်တားဆေးများနှင့်နွေရာသီတွင်ထိုးရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ဓာတ်ပုံများအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမပြုမီနှင့်ပြီးနောက် ဖတ်
မျက်နှာအတွက်အိုဇုန်းကုထုံးကဘာလဲ မျက်နှာအတွက်အိုဇုန်းလွှာကုထုံးကဘာလဲ၊ အရေပြားကုထုံးတစ်ခုကဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။ 2018-08-24 14:21:54 Красота Olga Sologub အရေပြားပေါ်တွင်အိုဇုန်းလွှာ၏အကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအလှကုန်များတွင်သုံးခဲ့ကြသည်။ ဒီဆောင်းပါးကနေအိုမီဇုန်းကုထုံးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့မျက်နှာတစ်လုံးအတွက်သူ့ရဲ့စျေးနှုန်း၊ ၀ က်ခြံ၊ ဝက်ခြံ၊ rosacea နှင့်မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းအတွက်ဘဲဥပုံကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကိုဒီဆောင်းပါးမှာသင်သိလိမ့်မယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အချက်များ၊ အကျိုးဆက်များနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကားအဘယ်နည်း။ အိမ်တွင်နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်၎င်းကို သုံး၍ ရနိုင်သလား၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသင်တန်းတစ်ခုဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။ ဖတ်
မျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် Bronzer မျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် bronzer ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ ၎င်းကိုအသုံးချပုံအဆင့်ဆင့်အစီအစဉ် 2018-08-20 14:05:12 Красота Olga Sologub ကြည်လင်တောက်ပသောအသားအရေသည်မိန်းကလေးတိုင်း၏အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ ဒီဆောင်းပါးကနေမျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် bronzer ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ အသားအရည်အတွက်ဘယ်လိုထုတ်ကုန်ကိုဘယ်လိုရွေးရမယ်ဆိုတာပုံတွေရဲ့အဆင့်ဆင့်ပုံကားချပ်မှာသင်သိလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဟာကပိုဝယ်လို့ကောင်းလဲ၊ အမှုန့်သို့မဟုတ်အရည်၊ အမှတ်တံဆိပ်များ Clarence, Mac, Dior, Letual နှင့်အခြားအရာများအကြောင်းနှင့်အနောက်မှဓာတ်ပုံများနှင့်တကွပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ ဖတ်
ချွေးပေါက်များကိုကျဉ်းစေသောနည်းလမ်းများ မျက်နှာပေါ်ရှိချွေးပေါက်များကိုကျဉ်းစေသောအကောင်းဆုံးအလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ရိုးရာကုထုံးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ 2018-04-01 12:17:03 Красота Olga Sologub မျက်နှာပေါ်ရှိချွေးပေါက်များကိုကျဉ်းစေသောအကောင်းဆုံးဆေးတစ်လက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာထိရောက်တဲ့ဆေးဝါးပြင်ဆင်မှုတွေကို ၀ ယ်နိုင်သလို၊ ရိုးရာရိုးရာမျက်နှာဖုံးကိုအိမ်မှာကောင်းကောင်း ၀ ယ်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းသိဖို့လိုတယ်။ ၎င်းသည်မုန့်၊ အလှကုန်ရွှံ့သို့မဟုတ်မျက်နှာဖုံးများကိုအက်စပရင်၊ အာလူးနှင့်သံပုရာ (သို့) ပျားရည်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အလှကုန်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်စျေးနှုန်းများကိုလည်းဆောင်းပါးတွင်သင်ပိုမိုဖတ်ပါ။ ဖတ်
မျက်နှာတခုပြီးတခုပေါ်လွင်အောင်ဆိုတာဘာလဲ မျက်နှာပေါ်ရှိအချက်ပြမီးကိုမည်သို့သုံးရမည်၊ အရောင်ရွေးချယ်ပုံကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချနည်းကိုလေ့လာခြင်း 2018-03-31 12:18:51 Красота Olga Sologub Highlighter မပါဘဲပြီးပြည့်စုံတဲ့မိတ်ကပ်ကိုမရနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၌မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကိုမည်သို့လိမ်းရမည်ကိုအဆင့်ဆင့်အစီအစဉ်ဆွဲပါ၊ အွန်လိုင်းစတိုးတွင်မည်သည့်အရာက ၀ ယ်ယူရန်ပိုကောင်းကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ highlighters ကောင်းများ၏စျေးနှုန်းများ၊ လျှောက်လွှာမတင်မီနှင့်အပြီးဓာတ်ပုံများ၊ အကြံဥာဏ်များ လိုချင်တဲ့အရိပ်ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ။ ဖတ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်မနာမည် Olga ပါ။ အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ကျန်းမာရေးချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏ blog မှကြိုဆိုပါသည်။ ငါ့အကြောင်းပိုသိ
© 1983-2020 © Olga Steshkina ၏ဘလော့ဂ် တက်ကြွသော link တစ်ခုရှိမှသာပစ္စည်း၏ပုံတူကူးခြင်းကိုအားပေးသည် takioki.life
privacy settings ကိုပြောင်းပါ